I-China Light Light, i-Solar Spotlight, Umvelisi we-Solar Floodlight
Inkcazo:Ukukhanya kwelanga,Ukukhanya kwelanga,Ukhukhula kwelanga,Ukukhanya kweHlabathi yeHlabathi,,
Ukukhanya kwelanga,Ukukhanya kwelanga,Ukhukhula kwelanga,Ukukhanya kweHlabathi yeHlabathi,,
Home > Imveliso > Ukukhanya kwelanga
Iintlobo zeMveliso ze- Ukukhanya kwelanga , singabakhiqizi abakhethiweyo baseChina, Ukukhanya kwelanga , Ukukhanya kwelanga ababoneleli / umkhiqizo, iimveliso eziphezulu zexabiso eliphezulu ze-R & D kunye nokuvelisa, sinemisebenzi epheleleyo emva kokuthengisa kunye nenkxaso yobuchwepheshe. Khangela phambili ekusebenzisaneni kwakho!
Ukukhanya kwelanga ukukhanyaKaninzi
Solar Camping LightKaninzi
Ukukhanya kweSitet StreetKaninzi
Solar Ukukhanya isebenzisa ukukhanya kwelanga eneji, iiphaneli elanga imali iibhetri emini, neebhetri nikeza kwamandla ebusuku. Ayifuni i-bipeline eqondile kwaye ibiza kakhulu. Iyakwazi ukulungelelanisa ukukhanya kwezibane nezibane ngokukhawuleza. Kukhuselekile, kusindiswa kwamandla kunye nokungcola ukungcola, ukuzinza nokuthembeka ngaphandle kokusebenza komsebenzi, kwaye kugcina ugesi kunye nokugcinwa.
Ukugcinwa kwamandla: ukubonelela ngombane ngokuguquka kwelanga photovoltaic, engapheliyo kwaye ingapheli. Ukukhuselwa kwendalo: akukho ngco liseko, akukho sandi, akukho mijelo.
Ukhuseleko: akukho zengozi ezifana nokutshatyalaliswa kombane okanye umlilo. Ukutya: Ukufakeka okulula, akukho mfuneko yokumisa iintambo okanye "ukuvula isisu" ukumba isakhiwo, akukho nto ixhala malunga nomda wokunciphisa amandla.
Ubomi obude: Umxholo wethekhnoloji ephezulu, inkqubo yolawulo, izixhobo zokusebenza ngamazwe ngamazwe, uyilo oluqilileyo, umgangatho onokwethenjelwa.
Ibanga eliphezulu: iimveliso zenzululwazi kunye nezobuchwepheshe, amandla aluhlaza, ukusebenzisa iiyunithi zifake ukubaluleka kwisayensi kunye nobuchwepheshe, umfanekiso ohlaza, ukuphucula ibakala.
Utyalo-mali obuncinane: utyalo-mali omnye kunye nokunye okulinganayo okwangoku (utshintsho olutshintsho lwangoku ukusuka kutshintsho lwamandla, ukunikezwa kwamandla, ibhokisi lokulawula, intambo, ubunjineli, njl.), Enye inxaxheba-mali, inzuzo yangexesha elide.
Fi my Global ngokukodwa wazisa izibane series zibani ngokweemeko zendawo: elanga ukukhanya street s, elanga ukukhanya ukufunda s, iirobhothi, izibane inkampu, njl, kunye uyilo ezimibalabala, kunye nokusetyenziswa longlife, ukuba umbala ubomi bakho.